Qadar iyo Mareykanka oo shalay heshiis rasmi ah kala saxiixday – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Qadar iyo Mareykanka oo shalay heshiis rasmi ah kala saxiixday
Dowladaha Mareykanka iyo Qadar ayaa qaaday talaadadii ugu horeeysay, iyagoona wada saxiixday heshiis is-faham ah oo ka dhan ah argagixisada, xilli ay wali taagan tahay xiisada siyaasadeed ee ka dhex aloosan dalalka Khaliijka iyo Qadar.
Wasiirka arrimaha dibada Qadar Maxamed Bin C/raxman Al-Thani iyo Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku dhawaaqay in heshiiskani uu yahay mid tallaabo loogaga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada.
Mr. Tillerson ayaa shalay isku maray caasimadaha Qadar iyo Kuwait, halka maantana la fillaayo inuu tago magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, si uu ula kulmo madaxda dalalka go’doomiyey Qadar.
Dowladaha Sucuudi Carabiya, Isutaga Imaaraadka Carabta, Masar iyo Baxreyn ayaa 5-tii bisha June jaray xiriirkii diblamaasiyadeed ee kala dhaxeeyey dalka Qadar, kadib marki ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada.
Dowladda Qadar oo ka jawaabaysa eedaymahaasi loo jeediyay ayaa sheegtay inaysan waxba ka jirin, iyadoona dowladda Sucuudiga ugu baaqday inuu saxiixo heshiiskaan oo kale ee la dagaalanka maalgelinta argagaxisada, hadii ay ka dhabtahay inay la dagaalamayaan argagaxisada caalamka.